चाड क्रोको लेखहरूमा Martech Zone |
द्वारा लेखहरू चाड क्रो
चाड क्रो सामिल भए टेकवुड परामर्श २०१ 2016 मा मर्जरको एक भागको रूपमा। हाल, उसले टेकवुडको कार्यान्वयन र खाता व्यवस्थापन अपरेसनहरू प्रबन्ध गर्दछ। उनले रेइनहार्ड विश्वविद्यालयबाट स्नातक डिग्री र कम्युनिकेशन्सको ट्राय युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तर डिग्री लिएका छन्। धेरै बर्षमा, चाडले भुक्तान गरिएको खोज विज्ञापनमा २ million मिलियन डलर भन्दा बढीको प्रबन्ध गरेको छ।
टेकवुड कन्सल्टि 2008्ग २०० 5000 मा स्थापित भएको हो र यो एक एलिट डिजिटल परामर्श हो जुन कार्बनिक र भुक्तान गरिएको खोजमा कोर दक्षता रहेको छ। २०१ 2017 को लागि Inc17 सदस्य, एटलान्टा, GA मा मुख्यालय, १ clients को टोलीको साथ 60० ग्राहकहरूको समर्थन गर्ने, टेचवुडको एसईओ र पीपीसी विषय क्षेत्रहरूमा गुणस्तर कार्यान्वयनको लागि प्रतिष्ठा छ।
गुगलको नयाँ घुम्ने विज्ञापन अपडेटले एडवर्ड अभियानहरूका लागि के अर्थ राख्छ?
मंगलवार, सेप्टेम्बर 19, 2017 मंगलवार, सेप्टेम्बर 19, 2017 चाड क्रो
गुगल परिवर्तनको पर्यायवाची हो। त्यसैले यो कुनै आश्चर्यको रूपमा आएको हुन सक्छ कि अगस्ट २ on मा, कम्पनीले अझै उनीहरूको अनलाइन विज्ञापन सेटिंग्समा विशेष परिवर्तन विज्ञापन घुमाउनको साथमा अर्को परिवर्तन ल्यायो। वास्तविक प्रश्न यो हो - यो नयाँ परिवर्तनले तपाईंको लागि, तपाईंको विज्ञापन बजेट र तपाईंको विज्ञापन प्रदर्शनको अर्थ के हो? गुगलले त्यस्ता परिवर्तन गर्दा विवरणको अधिकता दिनको लागि एक होईन, धेरै कम्पनीहरूले कसरी अन्धकारमा महसुस गर्छन्